Ukukhulisa amaChives Ngobuhle Obumnene be-anyanisi - Amakhambi
Ukukhulisa amaChives Ngobuhle Obumnene be-anyanisi
Konke Mayelana namaChives
Ungatshala Kanjani AmaChives
Kunezivumelwano eziningi kakhulu esizigcinayo. Ama-chives akhulayo ebhodweni noma embhedeni wegadi kulula ngokwanele ukuthi angenye yezinto zokuqala izingane eziningi ezikhulayo. Ukunambitheka kwabo kwe-anyanisi noma i-garlicky kumnene ngokwanele ukuthi ungakudla iqonde, kepha futhi benza uqweqwe oluhle kakhulu lwamazambane akho abhakwe noma okunye ukudla.
Amaqabunga awadli nje kuphela, kepha nezimbali ziyadliwa. Ufuna umbala omncane ongawengeza kumasaladi akho? Izimbali zeChive zilungele leyo njongo!
Kepha sengikhulumile okwamanje ukuthi kulula kangakanani ukukhula? Ngoba empeleni, lezi ezinye zezitshalo ezinhle kakhulu ongaqala ngazo ngensimu entsha empilweni yakho. Zikhula kalula kusuka enzalweni, zibukeka zizinhle engadini, futhi zisifanele isikhathi nomzamo.
Ngakho-ke ake sihlole konke okufanele ukwazi ngama-chives. Izithasiselo ze-Allium zedili lakho lesikhathi esizayo zizoba sesandleni sakho!
Imikhiqizo Emihle Yokukhula Chives:
IMonterey Liqui-Cop Liquid Copper Fungicide
Ama-chives akhulayo alula futhi anikeza ukunambitheka okumnandi kwe-anyanisi ezitsheni.
Amagama ajwayelekile AmaChives, u-anyanisi chives, ama-leeks asheshayo, u-garlic chives, ama-chives ama-Chinese
Igama Lesayensi I-Allium schoenoprasum ne-Allium tuberosum
Izinsuku Zokuvuna Izinsuku ezingama-30-60
Amanzi: Ngisho nomswakama ongaguquguquki
Umhlabathi Inhlabathi ecebile, evundile, ekhipha kahle
Umanyolo I-3-3-3 granular, njalo emavikini e-2-4 njengoba kudingeka
Izinambuzane UTrips, impethu ka-anyanisi
Izifo Ukunciphisa (i-fusarium noma i-pythium-based), isikhutha
I-Allium schoenoprasum ingaveza izimbali eziningi uma itshalwe kakhulu.
Okokuqala, ake sikhulume ngalokho esikubiza ngokuthi ama-chives. I-Allium schoenoprasum yigama le-botanical elijwayeleke kakhulu lalesi sidlo esinamakha ayizigaxa. Kusabalele, kutholakala emhlabeni wonke endle. Eqinisweni, ukuphela kwezinhlobo ze-Allium ezitholakala kuzo zombili Izwe Elidala kanye Nezwe Elisha!
Impahla eyigugu yezimpova, ikhipha izimbali kuma-inflorescence azungezile ama-blooms anombala onsomi onsomi ngaphezulu kwama-scape (iziqu zezimbali). Imbali ngayinye inamacembe amade ayisithupha akha isimo senkanyezi, futhi ahlangana ndawonye ngamaqembu aphakathi kwezimbali eziyishumi kuya kwezingama-30 nge-inflorescence ngayinye. Lezi zimbali zikhiqiza amathani ompe wezinambuzane ezithutha impova, ngokwanele ukuze zibekwe ezingeni eliyishumi lokukhiqiza umpe e-UK.
Ingxenye esijwayelene kakhulu nayo ibukeka ifana kakhulu ne- a u-anyanisi oluhlaza , kodwa okuncane. Amaqabunga made, ayindilinga futhi ayize, futhi akha izingqimba ezivela ku-basal bulb. Izitshalo eziningi zingahlanganiswa ndawonye, ​​zakha umata walesi sitshalo esifana notshani.
Kepha zombili izigaxa nezimbali ezakha ngamathiphu abo nazo ziyadleka. Ukusetshenziswa kwama-chives ngokuhlehla kubuyela emuva eminyakeni eyi-5000. AmaRoma ayekholelwa ukuthi anezinto zokwelapha, futhi abantu baseRomani noma amaRom bacabanga ukuthi balusizo ekubikezeleni inhlanhla. Amagama abo ajwayelekile avela ku- 'chives' noma 'anyanisi chives' kuya ku- 'rush leek', nokuhlukahluka okuningi.
Olunye uhlobo, i-Allium tuberosum, yaziwa kakhulu njenge- “garlic chives” noma “Chinese chives”. Njengoba ibukeka ifana notshani kunabalingani bayo abanjenge-scallion, lolu hlobo lukhiqiza izimbali ezimhlophe zezimbali phezu kwamaqabunga acabalele anokunambitheka okuncane kukagalikhi. Njenge-Allium schoenoprasum, i-Allium tuberosum ikhula isuka kubhalbhu, kepha ingasakazeka kalula yodwa.
Zombili zinemikhuba efanayo yokukhula. Futhi ayifiki ngaphezu konyawo ukuphakama ngosayizi wayo omkhulu, futhi empeleni i-anyanisi chive ivame ukuvunwa cishe ngamasentimitha ayisishiyagalombili ubude. I-garlic chive ingavunwa ngobude obufanayo.
I-Allium tuberosum, i-garlic chive, inamaqabunga ayisicaba nokunambitheka kwe-garlicky.
Uzibuza ukuthi ama-chives akhula kanjani? Uma kunjalo, ake sidlule ezigabeni zokuqala zendlela yokukhulisa ama-chives, bese sidlulela ezimweni ezinhle kakhulu ukuwagcina.
I-Chives iyisikhathi esipholile sonyaka, okusho ukuthi bavame ukulala phakathi nezinyanga zasehlobo. Tshala noma kusentwasahlobo ukubanikeza isikhathi sokuvuthwa ngaphambi kokushisa kokulala, noma ekwindla ukuze ubavumele bakhule kahle ebusika. Zidinga ukushisa kwenhlabathi okungama-60-70 degrees Fahrenheit ukuze kuhlume.
Ingabe ama-chives ahlala njalo? Yebo, ngakho-ke udinga ukuhlela ukubekwa kwakho ngokufanele. Zizobuya unyaka nonyaka endaweni efanayo.
Noma ungabeka umbhede ozinikele ukuze ama-chives akho akhule kahle, noma cabanga ngama-chives akhulayo ezimbizeni. Esimweni sezulu esipholile, izimo zelanga ezigcwele zihamba phambili, kepha zingaphila emthunzini oyingxenye uma nje zithola okungenani amahora ayisithupha elanga. Lokhu kubenza babe isitshalo esifanelekile ukuthi sikhule kwezinye zalezo zingxenye ezingaphansi kahle zensimu.
imibono yombala wezinwele ngezinwele ezinsundu
Kulula ukutshala ama-chives, kepha ngaphambi kokuthi uwakhulise, kuzodingeka uwaqale. Ukuze uqale kahle ikhanda, hlwanyela ngaphakathi endlini emavikini ayi-6-8 ngaphambi kweqhwa lokugcina. Ungabe usutshala ama-chives uma nje yonke ingozi yeqhwa isidlulile.
Ungahlwanyela imbewu ngqo engadini uma inhlabathi isifudumele. Hlwanyela imbewu cishe ngamasentimitha amabili ngokuhlukaniswa futhi ayijule ngaphezu kokujula ¼ ”. Lapho nje ziqala ukukhuphuka, zincane zibe ngamasentimitha angu-4-6 ngokuhlukana.
AmaChives akhula endle emazweni amaningi emhlabeni wonke nasezingadini.
Kepha manje njengoba sesikhulume ngokutshala ama-chives, nokuthi angakhuliswa kanjani ekuvuthweni kubalulekile futhi. Nayi i-run-down esheshayo kuyo yonke into oyidingayo ukuze ugcine izitshalo zakho ze-chive zijabule!
Ezimweni eziningi zezulu, ilanga eligcwele lilungele ukuthi ama-chives akho achume. Okungenani, umgomo wamahora ayisithupha okukhanya kwelanga ngosuku ulungile, kepha amahora angama-8 noma ngaphezulu elanga angcono kakhulu ekukhuleni okuhle.
Ama-chives amaningi aqinile-aqine aze afike kuzoni 3 futhi enza kahle kakhulu ngezikhathi zonyaka ezipholile. Intwasahlobo nokuwa yizikhathi ezifanele zonyaka zokuthi ama-chives akho asuke. Amazinga okushisa aze afike eminyakeni engama-40 ngeke abakhathaze nakancane. Lapho nje yehlela phakathi kwama-30’s, ungqimba olujiyile lwesivalo semboza ngomuthi luzovikela ama-bulb ekulimaleni okubandayo.
Ukushisa lapho ama-chives akho angaba nenkinga khona. Izitshalo eziningi ze-chive zizolala ngesikhathi sezindawo ezishisa kakhulu ehlobo. Bazobuya ekwindla, ngakho-ke ungethuki! Vele uqiniseke ukuthi banelanga eligcwele ukuqala ukubuya kabusha lapho isikhathi silungile.
Isikhathi esihle sosuku sokunisela ama-chives akho ekuseni. Lokhu kunikeza isikhathi esiningi sokuthi amaqabunga amade omile nokuthi amanzi amaningi anciphise enhlabathini. Ungakhetha i- ama-soaker hoses esisekelweni sabo uma uthanda, futhi lokho ngokuvamile kuyisinqumo esihle futhi.
AmaChives amelana nesomiso ngokulinganisela kepha akhetha umswakama ojwayelekile futhi ongaguquguquki. Ukuqinisekisa ukuthi bathola amanzi ajwayelekile kuzosiza izitshalo ukuthi zikhule ngokwengeziwe futhi zikwazi ukuvunwa okuphindaphindiwe. Zama ukugcina umhlabathi unomswakama, kepha ungagcini. Ukusebenzisa isivundisi ezungeze izitshalo kunganciphisa ukukhuphuka komswakama womhlabathi.
Inhlabathi yama-chives akho kufanele ibe manzi njengoba kushiwo ngenhla, kepha futhi idinga ukunotha nokudonsa kahle. Inhlabathi enesihlabathi ingavumela ukudonsa kahle kodwa kufanele ichitshiyelwe kakhulu ngomquba ukuhlinzeka ngezakhamzimba kanye nokugcinwa komswakama.
Ngaphambi kokutshala, kunconywa ukuthi usebenze ngo-6-8 ”wezinto ezinhle, ezicebile zomquba uma utshala embhedeni. Ezitsheni, sebenzisa ingxube yekhwalithi ephezulu enothiswe ngomquba omningi umquba wenkomo noma umquba wehhashi .
Izimbali ze-anyanisi chive zivame ukuba umbala o-purplish-pink.
Umanyolo olinganiselayo oyimbudumbudu, onjengefomula engu-3-3-3 NPK, ungasetshenziswa njalo emavikini angu-2-4 kuyo yonke inkathi yokukhula. Lokhu kunikeza ukudla okuningi kwezitshalo zakho. Khipha kancane umanyolo emhlabathini ozungeze isisekelo sezitshalo bese uwunisela kahle.
Futhi kuyindlela yokusebenzisa umquba noma izinto zezitshalo ezifakwe umquba njengomanyolo, inqobo nje uma sezikhulile. Lokhu kunikeza ukondleka okuncane ezitshalweni zakho, kepha kuthuthukisa inhlabathi isiyonke.
Ukuthenela, isitshalo se-chive, kumayelana nokuvunwa kunokugcinwa kwesitshalo. Kepha lokho akusho ukuthi akufanele uthene! Eqinisweni, ukuthena kungasiza ukukhulisa ukukhula okwengeziwe uma kwenziwa kahle.
Njengoba sizoxoxa ngokuvuna kancane, ake sigxile kulondolozo lwesikhashana. Ukubulala izimbali okuchithiwe kuqinisekisa ukuthi izitshalo zakho zibukeka ziphilile. Kuphinde kunciphise amathuba okusabalala kwembewu ngaphandle kwendawo yakho yokutshala.
Lapho ama-chives elele, amanye amaqabunga awo azophenduka aphuzi. Sika lokhu eduze komhlaba bese uwafaka umquba. Uma isitshalo sakho sithola ukugula noma ukulimala kwezinambuzane, ungaphinda usike lawa maqabunga, kodwa qiniseka ukuthi ugwema ukufaka umquba ezintweni ezigulayo.
Isitshalo se-chive sisakazwa ngembewu noma ngokuhlukaniswa.
izipikili ezinemibala eminingi zihamba ngo-2020
Ngenkathi sixoxile ngokutshala ama-chives engadini engenhla, ukwahlukanisa kuyindlela elula. Entwasahlobo, khetha iqoqo elikhulu nelisindayo lama-chives bese ulisusa ngokucophelela emhlabathini. Qinisekisa ukukhulula inhlabathi ukuze unciphise amathuba okulimala ezimpandeni.
Usebenzisa iminwe yakho, thula uthuli enhlabathini eyeqile bese ngobumnene udonsa ama-clumps ezinhlamvu ezingama-3-5. Qiniseka ukuthi iqoqo ngalinye linezinhlelo ezinhle zezimpande, bese uphinde utshale amaqoqo ama-bulb.
Amaqabunga e-Chive ayizigaxa, afana no-anyanisi oluhlaza, kepha nge-flavour ehlukile.
Manje njengoba usukwazi ukunakekela ama-chives akho, ake sikhulume ngokuthi ungavuna kanjani kahle. Uzokwazi ukujabulela ukunambitheka kwabo kwe-anyanisi omnene ngokushesha, kodwa futhi sizokhuluma ngokugcina!
Ukubuza ukuthi uzovuna nini ama-chives? Abanaso ngempela isikhathi esibekiwe sokuvuna. Iningi labantu bazobe bevuna ama-chives lapho benesidingo se-anyanisi flavour abayinikezayo.
Ukuvuna ama-chives, linda aze afinyelele kuma-intshi ayi-8 kuye kwayi-12 ubude. Sebenzisa oyinyumba izikeya ezimbili zensimu ukusika amakhekhe eduze kwesisekelo sesitshalo. Njengo-anyanisi oluhlaza, unganqamula yonke ingxenye eluhlaza yama-chives wakho inqobo nje uma ushiya i-intshi noma ngaphezulu ngenhla komhlaba ukuze uphinde ukhule.
Uma ungathanda ukusebenzisa izigaxa ze-chive noma izimbali ukupheka, nquma lezo eziseduze nesisekelo sesitshalo. Uzokwazi ukuthi sekuyisikhathi sokuvuna ama-scapes lapho okungenani angama-intshi angu-12 ubude futhi enethiphu e-tapered. Ngezimbali, linda zize ziqhakaze ngokugcwele futhi zinemibala egqamile, bese uzivuna ngaphambi kokuba ziqale ukuphela.
Ama-chives amasha asengadini kufanele adliwe ngemuva nje kokuvunwa ukuthola ukunambitheka okuhle kakhulu. Kodwa uma ungeke ukwazi ukuzidla zisuka, kunezindlela zokuzigcina uma usuzingenisile zisuka engadini.
Ama-chives amasha angafakwa ngaphakathi esikhwameni sepulasitiki umoya ucindezelwe kuwo. Zizohlala izinsuku ezimbalwa esiqandisini ngale ndlela, kepha zizoqala ukubuna ngokushesha.
Ukugcina isikhathi eside, nqamula kahle amakhekhe akho uwafake emathileyi e-ice cube. Sebenzisa amanzi anele ukumboza ama-chives, bese uwafaka iqhwa. Donsela kusihluzi semesh phezu kwesitsha ukuvumela amanzi ukuba aconse ngaphambi kokusetshenziswa.
u-brad no-angelina bayahlukana
Ngenkathi i-chives ingaba ome amanzi emzimbeni , bazolahlekelwa ukunambitheka kwabo okuningi. Ukomisa iqhwa inqubo engcono yokulungiselela ama-chives wesitoreji esomile.
I-Garlic chives inezimbali ezimhlophe ezihluke ngokuhlukile kune-anyanisi chives.
AmaChives amnandi impela, futhi ayifanele indawo engadini yakho. Kepha yiziphi izinkinga ezintsha ongahlangabezana nazo ngenkathi ukhulisa lezi zimnandi ezithandekayo? Ake sikhulume ngalokho!
Kwesinye isikhathi, iqoqo lama-chives lingaba likhulu ngokwanele ukuthi i- isikhungo siyafa . Lokhu akusho ukuthi sonke isitshalo asisebenzi, noma kunjalo. Susa isitshalo emhlabathini ngokucophelela ukuze ungalimazi izimpande, bese ukhipha izinhlamvu eziphilayo ngaphandle kwesigaxa. Ngemuva kwalokho ungafaka umquba phakathi nendawo uphinde utshale izingxenye ezihlukaniswe kabusha.
AmaChives athinteka ezinambuzaneni ezimbili ezivamile.
Ama-Thrips bathanda izimbali ze-chive. Lapho uzikhulisa, uzofuna ukugcina iso elibukhali lalezi zinambuzane, njengoba zimunca isiphu esibalulekile esitshalweni. Amafutha we-Neem noma insipho yokubulala izinambuzane izogcina lokhu kucasula kude nezikhukhula zakho.
Njengaku ama-shallots , anyanisi oluhlaza , noma eminye imibimbi eminingi, i- impethu ka-anyanisi kubeka ingozi kuma-chives akho. Le nkathazo yizibungu zempukane anyanisi, futhi igxumela phakathi ibulale ama-bulb. Faka ama-nematode awusizo enhlabathini, ngoba ayizilwane ezidlayo ezizodla izimpethu. Ama-nematode azuzisayo nawo anganciphisa ubungozi be-thrips!
Ukunciphisa isampula yinkinga yefungal ehlala enhlabathini. Kubangelwa i-fusarium noma i-pythium fungi, ibangela ukuthi izitshalo ezisanda kumila ziwele phansi zife, futhi zingadala nokubola kwezimpande kuma-chives amadala. Amanye ama-biofungicidal agents afana neMycoStop ayasebenza ngokumelene nokusabalala kwefungal. Tshala imbewu kuphela emithonjeni eqinisekisa imbewu engenazo izifo.
I-Downy isikhutha kungadala ukushintsha kombala noma okumpunga, amabala angathi awubukeka kahle emaqabungeni. Uma ushiywe endaweni isikhathi eside kakhulu, amaqabunga angaba phuzi futhi anciphise. Ama-fungicides asuselwa ethusi noma uwoyela we-neem ayasebenza kule nkinga.
Q: Ingabe ama-chives akhula emuva ngemuva kokusika?
A: Impela! Lokhu kuphela konyaka kuzoqhubeka nokukhula iminyaka.
Q: Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ama-chives akhule?
A: Kungathatha noma yikuphi ukusuka ezinsukwini ezingama-30-60 ukuthi ama-chives akhule ngokugcwele, avuthwe, futhi alungele ukuvunwa.
Q: Kufanele ngivumele i-chives iqhume?
A: Ungakwazi uma ungathanda. Ngeke yehlise ikhono lesitshalo lokwenza amaqabunga amasha. Kodwa-ke, uma ufuna ukugwema ukuzihlwanyela imbewu, susa izimbali njengoba ziqala ukuphela.
isihlanza indandatho yegolide yedayimane emhlophe
Isitolo esihle kakhulu sezingubo zomshado online
isembatho esiphakeme samabhuzu we-cowboy
ama-movie amahle kakhulu wemfihlakalo amazon prime